Taariikhda My Butros » Carar la Dogs: Qooyskaaga Pup Waxaad u hagto qofka wehelkaaga
Last updated: Jul. 13 2020 | 2 min akhri
Waxaa sida caadiga ah dhacdaa marka aad yaraan waxaa ka filan, laakiin marnaba xanuujiyo inay dedaal sameeyaan marka ay timaado raadinta jacaylka aad noloshaada. Dabcan, aad ay fariisan karaan sugaya nin ama naag ha of riyooyinkiinna aad si ay u muujiyaan ilaa albaabka hore, ama aad qaadi karto Eey ay xadhig iyo waxaa ka bixi. Jidadkee aad u malaynayso in dhaqso wehelkaaga aad u horseedi?
Carar la canine aad jeceshahay inaad keeni karto in jacaylka cusub. Ever aragto in marka aad ka soo baxdo socodka ama socda eygaaga, dadka aad joojiso oo waxaad ku tidhaahdaan, "Waxa uu si [cute, weyn, qalafsaneyn, friendly, macaan, goofy] iyo shisheeyayaal filaan ah friendlier? Tani waa run gaar ahaan marka aad leedahay saaxiibtinimo, eey xilka kula. Marna ma ogaan kii uu heli doontaa faraxsanahay jidka, ama kii uu ku ordo illaa iyo bilowdo leefleefo. Mushaharka in dareenka. Your eey yahay garsoore weyn dabeeco. Haddii uu ku faraxsan yahay xiisaha ah jacaylka ka iman kara, waxaa laga yaabaa inaad, aad.
Lahaanshaha eey ka dhigan tahay in aad marnaba tihid. Isticmaal in ay kuugu faa'iidayn haddii aad ka dareento foolxun oo ku saabsan ka qayb gal munaasabad naftaada by. Kaxaynta eygaaga iida dibadeed, tusaale ahaan, kordhinaysaa fursadaha kulan aad ka mid jacaylka runta ah aad - ama ugu yaraan, qof in ay la joog-joogaan waa kuwa xiiso leh oo jecel yahay eyda sida aad sameyn. Ciidaha tahay ama music dibadda badan oo, ama dhacdooyinka ee aad park maxalliga ah, soo dhawaynaynaa dhammaan saaxiibada aad afar lugood ah.
Fikrad kale ee ogolaanshaha aad pooch aad keeni aad paramour: waddo cusub. Haddii aad caadi u socdo agagaarka xaafadda gaar ah, ama ay weheliyaan raad la mid ah, meel tago oo kala duwan. Your eey jeclaan doono sahaminta jawi cusub iyo dhuuqista oo dhan caraftii cusub inta aad qaadato muuqaal ah (I.E. kelida kale jidka). Dhoola caddee ee qof kasta ee aad la kulantid, oo ha eey sameeyaan isbarasho aad u. Waxaase yaab leh, marka aad ha Rover qaado xuquuqda ah (ama xadhig ah), uu kaliya aad keeni kartaa in aadanaha ee riyooyinkiinna aad.